Your Uninstaller! Pro 7.5.2013.02 Full + Serial လေးပါ။ ~ မိုးညိုသား
Your Uninstaller! Pro 7.5.2013.02 Full + Serial လေးပါ။
2:09 AM Uninstaller, ဆော့ဝဲလ်များ No comments
ဒါလေးကတော့ 13/11/2013 ကမှထွက်လာတဲ့ Your Uninstaller Pro နောက်ဆုံးထွက်ကလေးပါ။ လိုချင်တဲ့သူများရှိရင် ယူလို့ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ.. သူရဲ့ Features တွေကိ်ုတော့ အောက်မှာဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း သေးသေးလေးပါ 6MB ကျော်ပဲရှိပါတယ် ။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ
Get the applications detail info even if it hide itself in deep directory, especially useful for finding out “Spy” applications. [PRO].